Amerika Latina : “Aiza No Tena Nalehan’ireo Nanjavona?” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Septambra 2013 15:29 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Dansk, Português, Español
Fihetsiketsehana noho ny antson'ny Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos [Fianakavian'ireo Vondron'olona Voafonja Nanjavona]. 2009, Santiago, Chile. Sary avy amin'i antitezo tao amin'ny Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Ampahany faharoa aminà lahatsoratra ahitàna andiany roa izy ity. Mba hahafahanao mahita ny ampahany voalohany dia potsiro eto. Manasa anao ihany koa izahay hitsidika ny Pejin'ny Biraon'ny Kaomisiona Ambonin'ny Zon'Olombelona, izay azonao idirana amin'ity rohy ity, raha mila fanazavana misimisy kokoa momba ilay lohahevitra.
Tao anatin'ny lahatsoratra teo aloha, nitrandraka ny sasantsasany tamin'ireo tantara sy hetsika nataon'ireo fianakavian'ny olona nanjavona tao Amerika Latina izahay. Nanatona akaiky naka ireo fijoroana vavolombelona, nanala sarona ireo vanim-potoana, sy nampiditra ireo hira malaza izay mitaky ny hoe “Aiza No Tena Nalehan'ireo Nanjavona?”
Taorian'ireo fanontaniana tsy nahitàm-baliny nandritra ny ampolo taonany sy ireo tranga izay mitohy mampitombo isa ny lisitr'ireo niharam-pahavoazana, azonay lazaina, ary isaorana ny fianakavian'izy ireny, fa azo jerena ety anaty tambajotra sosialy ety amin'ny aterineto ireo olona nanjavona sy ny tantaran'izy ireny, na dia ho virtoaly ihany aza.
Hitanay, araka izany, ireo fianakaviana sy namana manao ezaka hiady mba tsy ho iray hafa isan'ny iharam-pahavoazana noho ny fanjavonana an-terisetra toy izany koa ireny fahatsiarovana ireny. Amin'ity fomba ity, ny aterineto dia manjary loharano tsy mety ritra amin'ny resaka fandraisana andraikitra sy tantara izay miady manohitra ny tsimatimanota sy ny fiverenana amin'ny lasa.
Manokana habaka izahay ao anatin'ity lahatsoratra ity ho an'ny lohahevitra ao Però, Goatemala, Orogoay ary Meksika. Tahatahaka izay ihany, Tsipihanay ihany koa ny fandraisan'ny arcoiris TV [es] anjara, izay mahatonga ho azo tsidihana ny fanadihadiana iray [es] notantanan'i Ángel Palacios mikasika ireo nanjavona an-terisetra tao Venezoela.
Ao Però, ny fifandirana eo amin'ny Fanjakana Peroviana, Sendero Luminoso (Làlankely Mazava) sy ny the MRTA (Hetsika Revolisioneran'ny Túpac Amaru) no loharano nipoiran'ireo heloka bevava izay niteraka ny fisian'ireo nanjavona an-terisetra.
Ampolo taona taorian'ny nanolorana ny Tatitry ny Kaomisionan'ny Fahamarinana sy Fampihavanana, mamoaka voka-pandinihana ny Spacio Libre [es] mikasika ireo vokatra natolotry ny fitsarana Peroviana momba ireo niharam-pahavoazana noho ny fanjavonana an-terisetra. Ao amin'ny matoan-dahatsorany, voaaro ny zon'ireo niharam-pahavoazana hahazo valiny, ary natao lisitra ireo fampanantenana tsy tanteraka izay tsy manana alàlana hanaitra ny fitsaràna Peroviana :
Kely ny dingana vita raha resaka fanonerana, ary ambonin'ny zavatra rehetra, amin'ny resaka fikarohana ny marina sy hisian'ny tena fampihavanana tsy misy raorao, taorian'ny herisetra nateraky ny hadalan'ireo mpampihorohoro avy amin'ny Sendero Luminoso sy ny MRTA ary ny valinteny mitratrevatreva avy amin'ny fanjakana izay tsy manisy fanavahana eo amin'ireo tsy manan-tsiny sy ireo meloka sady mamono fotsiny tahaka iretsy fahavalo enjehany ihany.
Ary ny tena zavatra dia ireto isika tsy afaka ny hiresaka mikasika ny fampihavanana, rehefa ny sehatra manana ny lanjany eo amin'ny politika no miezaka manampim-bava sy mampihen-danja ny zava-notratrarina ao anatin'ny ezaka, miaraka aminà marimaritra sy fironana mivaingana ho amin'ny famoronana fahatsiarovana iray ary fikatsahana làlana iray hamelomana fanantenana ho an'ireo fianakaviana an'arivony izay namoy ny havan-tiany tanatinà tranga marobe (15.000), tsy manan-kevitra ny amin'izay toerana misy azy ireny.
Mbola ao Però ihany, i Renzo Salvador Aroni [es], mpahay tantara dia nanangona ireo tantara sady nandalina ny toe-javatra nitranga tamin'ireo fianakaviana izay mbola manatena hatrany hahita mangirana mikasika ireo havany nanjavona. Ao anatin'ny lahatsorany “Ny Fianakavian'ireo Nanjavona”, arovan'ilay bilaogera ny maha-zava-dehibe ny famerenana ny fahatsiarovana ara-tantaran'ny firenena ary sorìtany fa io koa dia mifaningotra amin'ny “famerenana ny fahatsiarovana ireo izay tsy eo”:
[…] Ny fahatsiarovana ny havan'ireo fianakavian'ny nanjavona, mitohy mino hatrany ry zareo fa hoe, indray andro any, mbola hiseho tava ireo havan-tiany. […] Sarotra ho an'ireo fianakaviana ny hanaiky tranga iray tsy voavaha.
Manazava ihany koa ny mpanoratra ny amin'ny toerana tànan'ireo sombintsombim-pahatsiarovana eo amin'ny fiainana andavanandron'ny olona. Hazavainy fa trangam-piainana mangirifiry izy ireny ary matetika ry zareo no maneho izany amin'ny alàlan'ny fitantarana am-bava, anaty fampisehoana ara-javakanto, anaty nofinofy, ary endrika hafa enti-milaza, sady mitanisa ampahany amin'ireo fijoroana vavolombelona ataon'ny renin'ny iray amin'ireo olona tsy hita nanjavonana.
- Raha hitako izy, hiteny amiko hoe: “Neny, aza mitomany ahy”.
Izany no fomba firesany amiko. Tsy nahita azy intsony indray aho [ny zanakolahy : Segundino Flores Allcaco], anatin'ny nofiko sisa. Hitako izy miaraka amin'ireo fitafiana nanaovany farany.
Any Goatemala, toerana izay ankalazàna isaky ny 21 Jona ny andro natokana ho an'ireo olona voafonja na tsy hita nanjavonana, ny bilaogy Comunidades de Población en Resistencia (Vondrom-piarahamonin'ireo Vahoaka anatin'ny Fanoherana) [es] dia manazava fa zavatra efa mahazatra iainana amin'izao fotoana ny fanjavonana an-terisetra ao Goatemala, izay nihanaka nankany amin'ny faritra sy mifampiankina amin'ny firaisana tsikombakomba mangina ataon'ny fanjakana:
Tsy tantara fahiny akory ny fanjavonana an-terisetra ao Goatemala. Heloka bevava atao amin'ny zanak'olombelona izany, amin'ny endriny tsy hay lazaina napetraka ao Amerika Latina, izay mbola mitoetra ho manan-kery ihany koa noho ny fampiasàna azy mitohy ho toy ny fifehezana ara-tsosialy sy rafitra politika mibahan-toerana; ary hatramin'ny hoe noho ny tsimatimanota izay midongizina mikasika ireo hetsika natao sy naseho androany, ankoatry ny zavatra hafa, amin'ny fanitsiana ny rafitry ny fahefana izay rantsa-mangaika, mamatsy sy manafina ireny heloka bevava ireny.
Ny bilaogy Familiares de Desaparecidos [Fianakavian'ireo Nanjavona] [es] koa dia mampivondrona ny fianakavian'ireo Orogoaiana tsy hita nanjavonana, izay tsy mitsahatra mikaroka sy manambara ny ezak'ireo olona monina ao Orogoay na any an-tsesitany :
Hatramin'ilay fisokafana demaokratika niarahantsika rehetra nitandrozotra tanaty fanajàna ny fahasamihafàn'ny fomba fisaina izay manamarika antsika, saingy niray nanodidina ny tanjona iraisantsika: FAHATSIAROVANA, FAHAMARINANA, RARINY ARY TSY HIVERINA MANDRAKIZAY
Any Meksika, mipoaka avy amin'ny adin'ireo mpandraharaha amin'ny resaka zava-mahadomelina ny fanjavonana an-terisetra. Nanao bokikely azo entin-tànana ny kaomity Meksikana Comité Cerezo [es], nantsoiny hoe “What to do in case of forced disappearance [es]” (Inona no atao raha tratry ny fanjavonana an-terisetra), azo trohana avy ao amin'ny pejin'ny tranonkalany.
Zava-dehibe ny anampiana hoe ilay lohahevitra momba ny fanjavonana dia tsy natokana fotsiny ho an'i Amerika Latina ary tsy hoe mamorona fotsiny ny ampahany amin'ny fahatsiarovana ara-tantara. Kanefa dia goavana ny isan'ireo olona izay manjavona amin'ny fomba mampiahiahy, ary marobe ireo izay nampanginina na nihorohoro tamin'ireny heloka bevava ireny.
Noho izany, ho famintinana azy, zava-dehibe ny hanasongadinana fa ny tolon'ireo fianakaviana dia mitohy ivelan'ny aterineto. Sady koa ireny fandraisana andraikitra sy hetsika ireny dia mahita ny akony ety anaty aterineto aloha sy aorian'ny andro iraisampirenena ho fahatsiarovana an-dry zareo. Amin'io fomba io, ny media sosialy dia manampy amin'ny famelomana ireo fahatsiarovana sy mampifandray ny vondron'ireo olona ivelan'ny sisintany misy azy ireo. Ny ambohipihaonan-dry zareo: ny fitadiavam-baliny sy ny tolona iraisana hisian'ny fahamarinana.